Save Video si iMessage ka a Windows Computer ma ọ bụ a Mac
> Resource> Video> Olee otú iji Zọpụta Video si iMessage ka ​​a Windows Computer ma ọ bụ a Mac
Natara na-akpa ọchị na vidiyo si na gị na ezinụlọ gị ma ọ bụ enyi site iMessage, ma na-achọ na-azọpụta ha na kọmputa gị? Ma ọ bụ ị na-apụghị ịzọpụta vidiyo si na iMessage na kọmputa gị? Echegbula. Nke ahụ bụ mfe. N'agbanyeghị otú ọtụtụ videos i nwere na gị iMessage na otú nnukwu ha bụ, i nwere ike ịzọpụta ha gị PC ma ọ bụ Mac na otu Pịa. Nke a ndu na-akpan dere maka nke a. Dị na-agụ na iji na-enweta n'ụzọ zuru ezu.
Abụọ mfe ụzọ zọpụta video si iMessage on iPhone
N'ezie, e nwere ụzọ atọ n'ihi na ị na-azọpụta iMessage videos: kpọmkwem ịgụ isiokwu gị iPhone na-data si, na adịrị iTunes / iCloud ndabere. N'agbanyeghị nke ụzọ ị na-ahọrọ, Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery)) pụrụ inyere gị aka ime ya. Ma nke ha ekwe ka ị na-azọpụta iMessage vidiyo si na iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 na iPhone 3GS na ụzọ abụọ. Ọzọkwa, ị nwere ike iji ha na-azọpụta ndị ọzọ data na gị iPhone dị ka ozi kọntaktsị, foto, ndetu, na otú pụta.
Download ikpe mbipute nke usoro ihe omume n'okpuru maka free:
Nkebi nke 1: Kpọmkwem ike iṅomi na-azọpụta vidiyo si na iMessage on iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS
Nkebi nke 2: Wepụ iTunes ndabere ịzọpụta video faịlụ site na iMessage on iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS
Ọzọ, ka na-agbalị iji zọpụta video faịlụ site na iMessage na Windows version nke Wondershare Dr.Fone. Ọ dịghị mkpa, ọ bụrụ na ị na-eji a Mac. Nzọụkwụ ndị yiri nnọọ ka ndị a.
Nzọụkwụ 1. Run usoro ihe omume na jikọọ na gị iPhone
Na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị mgbe na nbudata na wụnye ya. Mgbe ahụ jikọọ gị iPhone na kọmputa na-eme n'aka na ọ ga-ahụrụ site na kọmputa gị (adịghị agba ọsọ iTunes mgbe ị na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone), na ị ga-ahụ bụ isi window n'okpuru.
N'ihi na iPhone 4 / 3GS, e nwere ụzọ ọzọ. Ị nwere ike tinye elu mode site na ịpị-acha anụnụ anụnụ bọtịnụ na ala nke usoro si window. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ window n'okpuru.
Nzọụkwụ 2. Tinye scanning mode ike iṅomi gị iPhone
N'ihi na iPhone 4 / 3GS ọrụ, i kwesịrị iji na-eso ụzọ n'okpuru ịbanye ngwaọrụ scanning mode tupu Doppler:
1. Jide ngwaọrụ gị, na pịa "Malite" na window.
2. Jide Ike na Home buttons na gị iPhone n'otu oge maka kpọmkwem 10 sekọnd.
3. Hapụ Ike bọtịnụ mgbe 10 sekọnd agafeela, ma na-ejide Home button ọzọ 15 sekọnd. Mgbe ihe omume ahụ na-agwa gị na ị na banyere scanning mode, ị nwere ike hapụ ya. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-amalite ịgụ isiokwu na-akpaghị aka.
N'ihi na iPhone 5S / 5C / 5 / 4S ọrụ, ị na-adịghị mkpa na-eme nzọụkwụ n'elu. Kpọmkwem pịa "Malite iṅomi" button na isi window na usoro ihe omume ga-amalite ịgụ isiokwu gị iPhone maka data na ya.
N'agbanyeghị nke iPhone ị na-eji, ị ga-ahụ na windo n'okpuru Mgbe iṅomi amalite.
Cheta na: N'oge Doppler, ị nwere ike na-amalite Ka ịhụchalụ hụrụ data. Mgbe ị na chọpụtara na data na ị chọrọ ka e scanned si, ị nwere ike ị kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị Doppler n'oge ọ bụla.
Nzọụkwụ 3. Preview na-azọpụta iMessage video faịlụ
Mgbe iṅomi, usoro ihe omume ga-ewetara gị a Doppler N'ihi dị ka ndị a, ebe ị pụrụ ego niile hụrụ data na gị iPhone, dị ka igwefoto mpịakọta, foto iyi, kọntaktsị, wdg N'ihi na vidiyo si na iMessages, ị nwere ike pịa "Ozi" na- ịhụchalụ ọdịnaya. Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị vidio si iMessages, ị nwere ike họrọ "Ozi Mgbakwụnye". Akara ndị ị chọrọ ịzọpụta gị na kọmputa na pịa "Naghachi".
Cheta na: N'ụzọ dị otú a, usoro ihe omume na-okụt na nso nso-ehichapụ MMS, gụnyere Mgbakwụnye. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikewapụ ha, ị nwere ike gbanye button: Naanị gosipụta ehichapụ ihe.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Dr.Fone n'okpuru maka free ugbu a:
Nkebi nke 2: Wepụ iTunes ndabere ịzọpụta video faịlụ site na iMessage on iPhone 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Nzọụkwụ 1. mmekọrịta gị iPhone na iTunes na-eme ka a ndabere
Ọ bụrụ na ị chọrọ wepụ iTunes ndabere ịzọpụta gị iMessage video faịlụ, mkpa ka i nwere ihe iTunes ndabere na mbụ. Ọ bụrụ na ị na-amaghị ma na ị nwere, ị nwere ike jikọọ gị iPhone ka compute na mmekọrịta ya na iTunes-eme ka otu. Ọ bụ nnọọ mfe na-ewe gị a nkeji ole na ole. Mgbe ọ gụchara ya, biko wepuÚ iTunes na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Wepụ gị iTunes ndabere
Na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị na ịgbanwee gaa na nhọrọ: Naghachi si iTunes ndabere File. Mgbe ahụ ị ga-esi a window dị ka ndị a. Ebe a, gị niile iTunes ndabere faịlụ na-akpaghị aka hụrụ na-egosipụta. Họrọ onye na maka gị iPhone na pịa "Malite iṅomi" na-wepụ ya.
Nzọụkwụ 3. Preview na-azọpụta video faịlụ site na iMessages
Mgbe iṅomi completes, ị nwere ike ịhụchalụ na ego data na iTunes ndabere ugbu a. N'ihi video faịlụ site na iMessage, ị nwere ike họrọ "Ozi Mgbakwụnye", nke naanị ihe ị na mgbasa ozi ọdịnaya site na gị iMessage. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji lelee dum iMessage ọdịnaya, ị nwere ike họrọ "Ozi". Mgbe ahụ akara ihe ị chọrọ na-azọpụta ha na kọmputa gị site na ịpị "Naghachi".
Naghachi ehichapụ iPhone ozi: Nke a ndu-egosi gị otú iji weghachite ehichapụ ozi ederede site na iPhone ụzọ dị iche iche. Naghachi iPhone kọntaktị: Ị nwere ike naghachi ehichapụ kọntaktị na-enweghị a ndabere na iPhone na 3 nzọụkwụ ala. Naghachi iPhone iMessages: Ị nwere ike naghachi ehichapụ kọntaktị enweghị a ndabere na iPhone na 3 nzọụkwụ ala.
10 kasị mma Hindi nkiri na youku.com
Olee otú Tinye Photo ka Video